Fanaanka la tartamaya mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ugu xukunka dheer Afrika | Berberanews.com
Home WARARKA Fanaanka la tartamaya mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ugu xukunka dheer Afrika
Fanaanka la tartamaya mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ugu xukunka dheer Afrika
38 jir fanaan ah ayaa loolan adag ku haya mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ugu xukunka dher qaaradda Afrika, oo uu kula tartamaya xilka madaxtinnimada Uganda.
Robert Kyagulanyi, oo caan ku ah magaca Bobi Wine, ayaa sheegay inuu matalaya dhallinyarada dalka, halka Yoweri Museveni, oo 76 sano jir ah, uu ku ololeyanaya inuu dalka Uganda u horseeday xasillooni.
Ololaha doorashada waxaa hareeyay rabshado, iyadoo daraasiin dad ah ay ku dhinteen.
Horraantii isbucan waxaa la xannibay dhammaan baraha bulshada ka dib markii shirkadda Facebook ay xayiraad ku soo rogtay dhowr cinwaan oo xidhiidh la lahaa xisbiga talada haya.
Goobaha codbixinta ayaa lagu waday inay furmaan 07:00 subaxnimo, balse dhowr goobood ayaa laga so wariyay inuu jiray dib u dhac. Natiijada ugu horreysa waxaa la filayaa inay soo baxda Sabtida.
Madaxweyne Museveni ayaa markii lixaad u tartamaya xilkan oo uu 35 sano hayay.
Ololaha ayaa laga mamnuucay caasimadda Kampala iyo degmooyin kale. Mucaaradka ayaa sheegay inay sababtu tahay maadama ay ku xooggan yihiin degmooyinkaasi. Balse dowladda ayaa sheegtay in tillaabadaasi looga gol leeyahay in laga hortaga faafitaanka Covid19.
Musharrixiinta mucaaradka oo uu ku jira Bobi Wine – iyo taageerayaashooda ayaa dhowr jeer la xiray.
50 qof ka badan ayaa la dilay bishii Nofeembar markii la xiray Bob Wine.
Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday Arbacadii inuu la baxaya saraakiisha korjoogteyn lahaa doorashada, ka dib markii oggolaanshihii ahaa inay doorashada dusha kala socdaan lagala noqday.
Isagoo ka jawaabaya edeyntaasi ayaa afhayenka Museveni Don Wanyama tweeted wuxuu bartiisa Twitterka ku so qoray inay jiraan goobjoogayaal ka socda Midowga Afrika iyo Bariga Africa.
“Ma xasuusta markii ugu dambeysay ee ay Uganda korjoogto doorasho u dirsatay Mareykanka,” ayuu ku daray.
Dowladda waxay horay u sheegtay inay hubin doonto inay doorashada noqon doonto mid xor ah.
Bobi Wine ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay Khamiistii inay taleefoonkooda ku duubaan marka la tirinaya laguna dhawaaqaya natiijooyinka degaannada si ay uga hortagaan in lagu shubto doorashada.
Previous articleCongresska oo u codeeyay xil-ka-qaadis iyo Trump oo soo saaray bayaan
Next article“Dalka Somaliland debeddaa laga xoreeyay” Faysal Cali-waraabe